प्रदेश राजधानीको ववण्डर
Tuesday, 01.09.2018, 01:23pm (GMT5.5)
काठमाडौं । मुलुकको पुनःसंरचनाको नाममा जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको नारा घन्काउन लगाएर परचक्रीले नेपालको सहिष्णु समाजमा विद्वेष फैलाए । त्यही विवादले प्रदेशहरूको नामसमेत तय हुन सकेको छैन । अहिले यसैको अर्को रूप देखापरेको छ । प्रदेशको राजधानीको नाममा ।
प्रदेशको राजधानीको माग गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन चलिरहेको छ । प्रदेश नं. २ को राजधानीको माग गर्दै धनकुटामापाँच दिनदेखि आम हड्ताल चलरहेको छ । त्यस्तै धरानलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर धरानबासी राजधानीमा छन् । उनीहरूले बन्द,हड्ताल नगरी राजनीतिक लविङ सुरू गरेका छन् । त्यस्तै डोटी र वीरगञ्जमा पनि आन्दोलन चलिरहेको छ ।
डोटीमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै पाँच दिनदेखि आमहड्ताल जारी रहेको छ । त्यहाँ यातायातका साधन, बजार तथा सरकारी कार्यालय, गैह्रसरकारी संघसंस्था, शिक्षण संस्था सबै बन्द रहेका छन् । एकहप्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको संघर्ष समितिले गत बुधाबारबाट आमहड्ताल गरेको थियो ।
संघर्ष समितिले डोटीका विभिन्न ठाउँहरूमा सिठ्ठी बजाउँदै जनप्रदर्शन गर्नुका साथै दबाबमूलक सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सिठ्ठी जुलुसपछि सांस्कृतिक कार्यक्रममा परिणत भएको कार्यक्रममा दर्जनौँ स्थानीय कलाकार तथा स्रष्टाले आफ्नो कलामार्फत दबाब दिएका थिए ।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले सरकारमाझ आफूहरूले निरन्तर रूपमा एघारौँ दिनदेखि माग राख्दै आए पनि सरकारबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नआएपछि आफ्नो आवाज सरकार समक्ष पु¥याउन सिठ्ठी बजाउँदै जुलुस निकालेको बताउनुभयो । सरकारले दिपायललाई स्थाई राजधानी नतोकेसम्म सरकारको निर्णयअनुरूप आन्दोलनको स्वरूपमा फरकपन आउन सक्ने बताउँदै उहाँले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी रहने बताउनुभयो ।
आन्दोलनका कारणसडक, बजार सबै बन्द गरिएका छन् । जसले डोटी हुँदै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला र तराई जिल्लातर्फ जाने यात्रुहरू पैदल हिँडेर जान बाध्य भएका छन् । पदैल हिडँ्दै गर्दा बाटोमा चाउचाउ, विष्कुटलगायत पनि खान नपाएको पैदल यात्रुको गुनासो छ ।
बन्दमा कुनै पनि गाडीहरूमा तोडफोड नभए पनि बन्दको अवज्ञा गर्ने एम्बुलेन्स, मोटरसाइकललगायत सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । बन्दकर्ताले अछामबाट बिरामीको बाहना बनाउँदै डडेल्धुरातर्र्फ यात्रु लैजाँदै गरेको उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराको एम्बुलेन्सलाई समेत नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
उता वीरगञ्जलाई प्रदेश नं २ को राजधानी बनाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा रहेको संघर्ष समितिले शुक्रबारदेखि रिले अनशन शुरू गरेको छ । वीरगञ्जको घण्टाघरमा प्रादेशिक राजधानीका लागि गठित संघर्ष समितिको आयोजनामा रिले अनशन शुरू भएको हो ।
२ नं. प्रदेशको राजधानीको दावी जनकपुर र सर्लाहीबासीले पनि गरिरहेका छन् । सर्लाहीबासीले प्रदेशको ८ वटै जिल्लाकोबीच पर्ने सर्लाहीमा राजधानी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले राजधानी वीरगञ्जमा राख्दा सप्तरी, सिरहा र धनुषालाई टाढा पर्छ भने जनकपुर राखियो भने पर्सा र बारालाई टाढापर्छ ।
जनकपुर र वीरगञ्ज आआफ्नै विशेषताले विकसित भएको स्थानलाई फेरि राजधानी बनाएर अरू जिल्लालाई पछाडी पार्ने काम भएको सर्लाहीका नागरिक अगुवाको भनाई छ । वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै पहिलेदेखि नै आन्दोलन भैरहेकोमा शुक्रबारदेखि रिले अनशन सुरू भएको हो । अनशनको पहिलो दिन शुक्रबार पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र चौधरी, बसरूद्धिन अन्सारी, शम्भु गुप्ता, ओमप्रकाश सर्राफ, माओवादी नेतृ दुर्गा क्षेत्री, वीरगञ्ज युवा समाजका अध्यक्ष कमल चौगाई, रूदल ठाकुर, सञ्जय सर्राफ, महमुद अन्सारी, वृजेश चौधरी, रञ्जु दहाल गरी १२ जना बसेका छन् ।
जनकपुरलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको चर्चा शुरू भएदेखि नै वीरगञ्जमा त्यसको विरोध भइरहेको थियो । बारा, पर्साका विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा, युवा, विद्यार्थी नेताहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर दवावमुलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन् ।